Amanqanaba okubukela kwi-Ibex 35 | Ezezimali
Amanqanaba okubukela kwi-Ibex 35
Ukuqhekeka kwenkxaso yamanqaku ayi-9.000 kwisalathiso semilinganiselo yee-equity zaseSpain, i-Ibex 35, icwangcise zonke ii-alamu kuhlalutyo lobuchwephesha. Ukuya kwinqanaba lokuba inokubonisa utshintsho olubaluleke kakhulu, ukusuka kwi-bullish ukuya kwi-bearish ngeentsuku ezimbalwa. Kodwa unokufikelela phi umthombo wesalathiso wentengiso yaseSpain? Ngokomgaqo, indawo yokuqulatha ijolise kumanqanaba phakathi kwamanqaku ayi-8.700 kunye nama-8.900 leliphi inqanaba lamathontsi okugqibela.
Ukuba eli nqanaba libalulekileyo liye lagqithiswa kuqwalaselo lwamaxabiso kwiimarike zesizwe zokulingana, kuyakufuneka ukuba ucinge ngamanqaku ayi-8.300. Ngamanye amagama, kuya kubakho indawo eninzi yokuphulukana nenxalenye elungileyo yemali etyalwe kwimarike yemasheya. Eli nqanaba lamaxabiso lihambelana nemeko apho Brexit kwiminyaka embalwa edlulileyo. Yinkxaso enamandla ngakumbi kunabanye kwaye apho uninzi lwabahlalutyi bezezimali belindele ukuba lisebenze njengedama lokuthintela ukuvela kwesalathiso semilinganiselo yezabelo zaseSpain.
Ukuba ngaso nasiphi na isizathu ikhutshiwe phantsi, kwaye ngobunzulu obuthile, ngekhe kubekho khetho ngaphandle kokuyilinda ihambe kakhulu kufutshane nama-7.000 amanqaku imvelaphi yokunyuka okukhulu kokugqibela kwiimarike ze-equity emva kwengxaki yezoqoqosho ka-2008. Ayinakukhanyelwa ukuba ijongise kula manqanaba, ingakumbi kwixesha eliphakathi. Ingayimeko eyingozi kakhulu kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kungenxa yokuba ipotifoliyo yakho yotyalo-mali iya kwehla ngexabiso xa ungazitshitshisi izikhundla zakho ngexesha. Ngobungozi obukhulu kwisitetimenti sakho sengeniso.
1 Iziphumo zokushiya amanqanaba e-9.000
2 Zeziphi iindlela ezinokwenziwa?
3 Amacandelo achaphazeleke kakhulu
Iziphumo zokushiya amanqanaba e-9.000
Ukulahlwa kwezi zithuba kunempembelelo ethe ngqo kwizenzo zabatyali mali abancinci nabaphakathi. Eyokuqala iya kuba yile i-uptrend iya kufakwa kwi-bud (kunye necala) apho bekuqhubeka khona kude kube ngoku. Ngamanye amagama, isalathiso semilinganiselo ye-equities yaseSpain iya kusuka kwi-bullish iye kwi-bearish. Ngenxa yolu tshintsho ngesiquphe, bekungayi kubakho ndlela yimbi ngaphandle kokutshintsha isicwangciso-qhinga sotyalo-mali silungelelanise imeko entsha esiza kusinikwa yi-Ibex 35. Oku kuya kuthetha ukuba kwiimeko ezininzi kukhethwa ukuhlawulwa kwemali kwiakhawunti yethu yokonga.
Ngelixa kwelinye icala, akukho mathandabuzo ukuba siya kunyanzelwa ukuba sijongane nalo Iziphumo zengeniso esisigxina. Ngomngcipheko nakwizikhundla zabo, kodwa esinokuthi sikuphephe ukungqubana okukhulu okunokuthi kwenzeke kwiimalike zezemali. Ngale ndlela, kungcono kakhulu ukuba ulinde kancinci kwaye usebenzise icebo lokucoca ulwelo ukuze ungenzi impazamo esinokuzisola ngayo ngexesha elifutshane kakhulu. Ewe, kuya kufuneka sicinge ngamanqanaba ajikeleze amanqaku angama-8.700 ukuze phantse sibawise, ngeli xesha sithi ndlela-ntle kwizikhundla zethu kwimarike yemasheya.
Zeziphi iindlela ezinokwenziwa?
Eyona nto icetyiswayo kukushenxisa izikhundla ukuba le meko izalisekisiwe. Ukuze emva kweenyanga okanye iminyaka embalwa sithathe utyalomali kwakhona. Kodwa ngeli xesha ngamaxabiso okhuphiswano ngakumbi kunangaphambili kwaye ke amaxabiso aya kuba ne- ukubanakho okukhulu kuhlaziyo lwayo. Asinakulibala ngeli xesha ukuba izabelo ze-Banco Santander zisondele kakhulu kwi-euro ezintathu ezinesiqingatha. Eli lixabiso elixineneyo, kodwa ngokuqinisekileyo linokuba sezantsi ngasekupheleni konyaka. Kweliphi inokuba lithuba lokushishina esinokuthi silisebenzise xa sisebenzisa isicwangciso esifanelekileyo nesilungeleleneyo sokutyala imali
Esinye isiphumo kule klasi yokusebenza kukuba isivuno sesahlulo siya kwanda. Ukuya kwinqanaba lokuba inokukhula ngeeshumi zepesenti ngaphezulu kwamanqanaba akhoyo ngoku. Kodwa okoko nje sizishiyayo izikhundla kukhuseleko ezenza isalathiso somlinganiso wezabelo zaseSpain. Nangona ikwindleko yokwenza ukuthengisa ngelahleko, kodwa kuyo nayiphi na imeko ngumngcipheko ekufuneka siwuthathile ukusukela ngoku. Ngaphaya kolunye uthotho lokuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Amacandelo achaphazeleke kakhulu
Ewe, kule meko, kuyakubakho amanye amacandelo esitokhwe asesichengeni kunamanye. Kwaye phakathi kwabo amaqela ezemali, iibhanki kunye nakokhuseleko lokuhamba. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba baya kwenza kakubi ngakumbi kunamanye amaxabiso esalathiso somlinganiso wezabelo zaseSpain. Njengoko kuye kwenzeka ukuba kuqinisekiswe ngexesha lenyanga kaJulayi, apho bezizezona mpahla zezoqoqosho zohlwaywa kwimarike yesizwe. Ngokuhla okuye kwezinye iimeko kwafikelela kwi-10% kwiintsuku ezimbalwa zokurhweba.
Ukuba inkxaso ejikeleze amanqaku ayi-8.700 ayixhaswanga, akukho mathandabuzo ukuba kwakhona la maxabiso ngawona aya kwenza okona kubi kwiimarike zezemali. Kule mizuzu siyabona Ukwehla kweseshoni enye ngaphezulu kwe-5%. Ezi zisitokhwe ezinoburharha ezihlupheka kwezona meko zintle zeemarike zokulingana. Kuya kufuneka zithintelwe kuzo zonke iindleko, ubuncinci ngexesha elifutshane kwaye mhlawumbi nakwixesha eliphakathi. Ayothusi into yokuba unokuninzi okuphulukene noku kunokuzuza.
Kwelinye icala, asinakulibala ukuba ukulungiswa kubonakala ngathi kuye kwahlala iminyaka embalwa. Kwaye eyona nto intle onokuyenza okwangoku ukuphuma kweemarike zezemali ukukhusela imali yakho eyinkunzi. Njengokukhetha, ungaya kwingxowa-mali exubeneyo edibanisa umvuzo oguqukayo kunye nengeniso esisigxina kunye necandelo lemali okanye amanye amaxabiso ukwenza ulondolozo lube nenzuzo ngakumbi ukusukela ngoku. Ngokukodwa ukuba i-Ibex 35 ekugqibeleni iyaphule inkxaso enayo kumanqaku e-8.300.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Amanqanaba okubukela kwi-Ibex 35
Yintoni emayenziwe kukuqokelelwa kwengxowa mali yethu yotyalo mali?